Midabka & Dheeh - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
Midabka waa walax budada ah ee loo isticmaalo midabaynta. Waa beelaya biyo, dufan, cusbi, dareeraha organic, iwm, laakiin waxaa la isku kala firdhiyey karaan warbaahinta kuwaas in la sameeyo midabaynta waxaa waxayna leedahay awood ku daboolaya qaarkood. Midabka waa wax lagama maarmaan ah sida xawliga ah u samaynta rinjiga, khad, Jinka saliid rinjiyeynta, ka dhigi-up rinjiga saliid, warqad midabka iyo wixii la mid ah. Ka sokow, pigments waxaa sidoo kale loo isticmaalaa buuxinta iyo midabaynta balaastigga, waxyaabaha caag iyo fiber dardaro dheecaanka ceeriin.
Dheeh waa xarunta ah organic ka dhigaya waxyaabaha kale ee midab bayaan ah, si adag oo sidoo kale loo yaqaan dheeha dardaro, sababtoo ah iyaga ka mid ah ugu isticmaalka hadda jira dardaro. Dheeh ayaa loo qaybin karaa biyaha ka dhasha saxarka, saxarka ahaannooca dareeraha, biyaha ka dhasha fiirsashada midabka, fiirsashada midabka ahaannooca dareeraha sida ay xaaladda. Sida laga soo xigtay codsiga, waxaa loo qaybin karaa dheeh dhoobada, dheeha daahan, dheeha dhar iyo dheeh caag ah.
Talinaynaa qalab Midabka & dheeha wax soo saarka: superfine ES / DS sax ah saddex rullaluistemadka mil l, taxane DYS saddex dhagax rullaluistemadka Haydarooliga, taxane YS / YSS Haydarooliga dhagax saddex duuban, sq / JRS taxane saddex rullaluistemadka dhagaxshiidka, Taxanaha WSP Fast Flow kuusha Mill, taxane WST turbo Nano dhagax ciid,